Barnaamijka Fogaynta daawada si Amaan ah | Oregon's Kitchen Table
Oregon's Kitchen Table
Barnaamijka Fogaynta daawada si Amaan ah
Gobalka Oregon wuxuu hayaa barnaamij cusub oo loogu talagalay in lagu xaqiijiyo in dadka ku dhaqan gobalkeena ay helaan qaabab ay si amaan ah iskaga fogeeyaan daawooyinka aan loo baahnayn. Barnaamijku wuxuu dadka siinayaa goobo ay geeyaan daawooyinka la nacay halkii ay iska tuuri lahaayeen ama bulaacada ku falaashi lahaayeen. Barnaamijkaan waxaa la yiraahdaa Barnaamijka Fogaynta daawada si Amaan ah.
Gobalku wuxuu doonayaa inuu ogaado qaabka ugu wanaagsan ee aad u celin karto daawada aad nacday si amaan ah. Fadlan ma naga caawinaysaa buuxinta xog aruurintaan si aad noola wadaagto fikradahaaga ku saabsan arintaas?
Waxaad qayb ka tahay bulshada fikirkaaguna wax badan ayuu nooga dhigan yahay. Jawaabahaaga xog aruurintaan ayaa gacan ka gaysanaysa inay noo fududeeyaan dhammaanteen intaan iskudayayno xaqiijinta inaan si amaan ah u qubno daawooyinka aan nacnay.
Fadlan buuxi xog aruurintaan kooban haddii aad degan tahay Oregon. Adigga iyo dadka kalaba waxaad buuxin kartaan ilaa laga gaaro Juun 16, 2021.